Gaming LOTUS seza solosaina famerenana | Vaovao momba ny gadget
Famerenana seza solosaina Gaming LOTUS
Villamandos | | General, hevitra
Isika izay miasa mandritra ny ora maro eo alohan'ny solosaina dia mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny hipetraka tsara fotsiny, fa ny an'ny manana seza tsara kalitao mamela antsika hipetraka tsara sy hiasa amin'ny fomba milay. Nandritra ny herinandro farany tao amin'ny birao izay nanoratako ny lahatsoratro rehetra dia manana mpiara-miasa vaovao aho, ahafahako mipetraka sy miasa, misaotra an'i ophisillas Nomenao izahay hizaha toetra ny iray amin'ireo seza fiasan'ny birao.
Raha ny amiko dia nalefan'izy ireo tamiko ilay maodely Lalao LOTUS izay miavaka amin'ny fahitana azy voalohany amin'ny volony, amin'ny manga. Ary koa, tsy ny zava-drehetra no mifarana amin'ny famolavolana, satria raha vao mipetraka ianao dia mahatsapa fa mendrika izany ny fampiasam-bola amin'ity seza ity. Raha te hahalala antsipiriany misimisy kokoa ianao dia tohizo hatrany ny famakiana satria mandritra ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny momba ny zavatra niainantsika sy ny hevitray momba ity sezan'ny birao ity.
Alohan'ny hanombohako handinika ity seza ity dia mila milaza aminao aho fa tsy hijery ny vidiny ary izany dia raha mandany ora maro toa ahy mipetraka amin'ny birao na eo alohan'ny solosaina ianao dia mila seza tsara, tsia maninona izay tsy maintsy ataonao, andoavana izany, sa ny vola no zava-dehibe kokoa noho ny fahasalamanao?
2 Fampiasana seza
Mikasika ny famolavolana seza dia tsy misy fomba tsara kokoa hanehoana izany noho ny amin'ny sary vitsivitsy izay hitanao zaraina manerana ny lahatsoratra. Na izany aza tsy maintsy ampiantsika izany Izy dia seza filalaovana tena izy miaraka amin'ny famaranana metaly ary miaraka amina famaranana hoditra ary harato miaina mangana sy mainty..
Ny eritreritra dia ergonomika tanteraka, ary raha ny fahitako azy dia olona lava be aho, mahazaka tanteraka ny lamosiko sy ny vatako amin'ny ankapobeny. Ny iray amin'ireo zavatra tiako dia ny tsy isalasalana fa ny famerenany ny lamosina ary koa ny fahafahako manala ireo sandry izay indraindray rehefa miasa dia mety tena tsy mahazo aina.
Tsy handainga aminao aho, fa ny ankamaroan'ny sezan'ity karazana hitantsika eny an-tsena ity dia mamela antsika hanao ireo asany ireo. Na izany aza, ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mitovy amin'ny endrika, izay amin'ity tranga ity dia mihoatra ny tsara ary saika hiteny aho na dia mahavariana aza.
Amin'ity maodely LOTUS ity no ahitantsika ny levera mahazatra eo ambany izay ahafahantsika manitsy ny haavon'ny toerana 46 santimetatra ka hatramin'ny 55 santimetatra fatratra. Azontsika atao ihany koa ny misafidy ny fametrahana ny seza hanomezana izay ilainay.
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny iray amin'ireo tombony tena tsara hitanay dia mitoetra ao anaty sandry azonay angonina mba tsy hanelingelina anay amin'ny fotoana sasany.
Atorinay anao izao ny Endri-javatra lehibe amin'ity seza Computer Gaming LOTUS ity;
Fitaovana: hoditra sy jiro sentetika, mainty sy manga tsirairay avy
Loko: Manga, na eo amin'ny Internet aza dia ho hitantsika ireo kinova manga, mena, maitso, volomboasary, mainty, fotsy ary fotsy
Haavo seza: 46 - 55 santimetatra
Sakan'ny seza: 50 santimetatra
Halalin'ny seza: 51 santimetatra
Haavon'ny lamosina: 78 santimetatra
Fitaovam-piadiana: misy fehin-tànana miorina sy miforitra
Kodiarana: matotra manokana 11mm x 50mm izay tafiditra ao
Ny lanja farany ambony izay mahazaka: 110 kilao
Lanja: 16 kg
Warranty: 24 volana
Ity seza solosaina Gaming LOTUS ity dia azo vidiana amin'ny alàlan'ny ofisillas ao amin'ny rohy manaraka. Ny vidiny dia 139.90 euro miaraka amin'ny fandefasana trano maimaim-poana izany dia hahatonga antsika handray ny baikontsika mandritra ny fotoana iray izay hanomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 andro.
Raha ny momba anay dia nijanona niaraka tamin'ny kinalan'ny seza miloko manga izahay, fa amin'ny alàlan'ny tranonkala efa natolotray anao, dia afaka ahitanao azy amin'ny loko maro misy, manokana amin'ny manga, mena, maintso, volomboasary, mainty, fotsy ary fotsy . Ho fanampin'izany, amin'ny tranonkala dia misy maodely seza maro karazana, amin'ny karazany rehetra ary koa kojakoja hafa ho an'ny birao izay azo antoka fa hisarika ny sainao vantany vao mijery ianao.
Tonga ny fotoana sarotra indrindra amin'ny famakafakana tsirairay ny fitaovana na vokatra ary ny fanomezana ny hevitsika. Voalohany indrindra, dia tokony homarihina fa ny seza dia raisina ao an-trano nefa tsy mipetaka, zavatra izay toa hafahafa nefa tena ara-dalàna satria vokatra lehibe loatra. Tsotra tokoa ny fivoriambe, na dia maharitra kely aza ny fanasokajiana ireo ampahany ary mampifanaraka azy ireo amin'ny fomba marina.
Mikasika ny fandefasana entana dia tsy maintsy lazaiko fa haingana be izy io ary tonga tao anaty boaty avokoa ny zava-drehetra, na dia teo aza ny iray amin'ireo sandry naratra voadona mafy. Mazava ho azy Avy any Ofisillas, mora daholo ny nanovana, zavatra iray izay manan-danja lehibe tokoa, na dia teo amiko aza dia nanapa-kevitra ny tsy hanolo ilay vokatra izy tamin'ny farany. Izany dia nahafahantsika nahafantatra fa ny antoka atolotry ny mpanamboatra dia mandeha tsara ary raha misy ny olana mety hitranga dia mahita valiny haingana sy ambony indrindra izahay.
Ankehitriny ny tena zava-dehibe dia tonga ary na dia teo aza ny fahatsapana voalohany rehefa nipetraka dia tena ratsy dia niova ny zava-drehetra rehefa nipetraka nandritra ny andro maromaro aho. Ary efa zatra seza tena ratsy izay efa tena niharatsy io, ny fanovana ho tena seza dia tena sarotra, satria ny vatako nieritreritra fa mahazatra ny hipetraka amin'ny zavatra sarotra sy tsy mahazo aina ary tsy amin'ny zavatra malefaka sy mahazo aina.
Mandrak'androany ary rehefa afaka andro maro dia mbola mampiasa ity seza ity aho, izay amin'izao fotoana izao dia tsy hiova amin'ny toerana hafa aho. Ary koa, tahaka ny maro aminareo izay miahiahy fa ny endrik'ity seza ity dia tonga lafatra ao amin'ny biraoko, feno junk izay misongadina ambonin'ny seza rehetra io seza LOTUS io.
Ahoana ny hevitrao momba ny sezan'ny Computer Computer LOTUS izay efa nodinihinay androany amin'ity lahatsoratra mahaliana ity?. Lazao aminay ny hevitrao momba ilay seza izay efa nodinihinay androany ary raha mieritreritra ny mety hahazo izany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Famerenana seza solosaina Gaming LOTUS
Ireo mpanamboatra lehibe dia tsy handefa smartwatches amin'ity taona ity
Apple dia mampiseho ny toetra tsaran'ny iPhone 7 Plus amin'ny dokambarotra hafahafa